TCS Careers - Tata consultancy services Jobs and Recruitment Help
Robert Half ny orinasam-piantsorohana tsara indrindra sy mpampiasa
Jobs ao Dubai ho an'ny Iraniana
navoakan'ny Dubai City Company at Aogositra 17, 2018
Ny karazana TCS dia ampahany amin'ny tolotra omena. Amin'ny alalan'ity orinasa saina ao India ity. Ary amin'izany, raha mitady olona avy any India ny Dubai firenena tsara indrindra. Mazava ho azy fa ny serivisy consultata Tata dia iray amin'ireo fikambanana tsara indrindra sy avo lenta. Ankoatra izany, ny orinasa dia fantatra Internationally. Amin'ny lafiny iray, misy olona be dia be manam-pahaizana amin'ny maha mpanatanteraka ambony azy. Ary mazava ho azy ny orinasa mikapoka hatrany ny tanjona kendrena.
Satria ny tetikasa vaovao dia nifindra tany Dubai. ary afaka mamindra toerana ny olona haingana kokoa noho ny teo aloha. Ny TCS Jobs dia mandeha eny an-dalana. The tsara indrindra azo atao. Izy io dia azo tanterahina amin'ny firoboroboana raharaham-barotra. Ankoatra izany, ny Ny mpikaroka asa dia mandinika ny fahafaha-manao manerantany miaraka amin'ny Tata Consulting Services.
Ao an-tsaina, ity tarika ity dia manantena ny antonony. Ary mijery ity orinasa ity. Satria kely ny fampahalalana dia afaka maka ny toerany eo amin'ny sehatra an'izao tontolo izao. Ary olona manana traikefa tsara. Azo antoka fa mahay hanomboka asa any Emirates. Ho mpitady asa, tokony hijery ny fomba TCS ianao manampy mpivahiny. Satria miditra maneran-tany izy ireo. Ary manao ny Idia tsena mihamitombo manerantany. Ary raha ny zava-misy, tantara vaovao momba ny serivisy mahatalanjona mikoriana manerana izao tontolo izao.
TCS asa aman-draharaha
Ok, andao hanomboka amin'ny antsipiriany kely. Ny olona mety, amin'ny ankapobeny, dia afaka miasa maneran-tany. Amin'ny lafiny ratsy, fikambanana iraisam-pirenena lehibe. Manana be dia be Sehatra sy Indostria hiasa. Amin'ny lafiny tsara, eto ambany manam-pahaizana ho an'ny asa iraisam-pirenena. Nasongadin'ireo orinasa tsara indrindra ho an'ny orinasa TCS.
Banky & Financial Services
Fividianana entana sy fizarana
Fifandraisana, Media & Teknolojia
fiainana Siansa & fikarakarana ara-pahasalamana
Travel, Fitaterana sy tia mandray olona
ankehitriny mila mametraka fanazavana vitsivitsy isika. Ny haben'ny orinasa dia mpiasa 10000 +. Amin'ny ankapobeny, ny orinasa dia natsangana hatry ny ela tao 1968. Ny karazan'ilay orinasa dia ampahibemaso (TCSN). Raha tsiahivina dia mitombo ny fanabeazana any India. Amin'ny ankapobeny ny resaka Computer Computer. Ity firehana ity dia ireo orinasa 10 ambony fotsiny manerantany. Ohatra, orinasa Hardware & Software. Manamboatra ny fidiram-bolan'ny 10 + miliara (USD). Mahazo karama ambony isan-taona i Wich eo amin'ireo mpifaninana iraisam-pirenena. Ohatra, Accenture, IBM, Infosys ary Apple mihitsy aza. Tsy resaka hafa intsony ny serivisy mpanjifa sy rojo hotely lehibe. Ny asa lehibe an'ny Tata toro-hevitra.
Amin'ny ankapobeny, dia manampy ny mpanjifany hitombo izany. Sady mitantana vaovao tetikasa mahaliana eny an-dalana. Ny fitantanana manampy ireo orinasa kely kokoa hahatratra ny tsy fahombiazan'ny orinasa. Amin'ny lafiny iray, ny orinasa dia mitarika mpamatsy IT eran'izao tontolo izao. Noho izany, ao an-tsaina, olona manana traikefa tsara. Nanam-potoana hiasana amin'ny orinasa iraisam-pirenena. Ny iray amin'ireo asa tsara indrindra amin'ny consulting, sy ny outsourcing banga ny serivisy. antoka, natolotr'ireo mpitantana mpanatanteraka. Tata consultancy services manolotra asa manerantany. Ohatra, azonao apetraka amin'ny toerana banga ny fandidiana. Amin'ny ankapobeny, asa vaovao napetraka any amin'ireo firenena mihoatra ny 40. Ary mihoatra ny kontinanta 5. Noho izany, azo antoka fa ny mety hisian'ny asa miaraka amin'ny TCS ny orinasa dia mihoatra ny goavana!.
Structure Company TCS
TCS Company, amin'ny ankapobeny, serivisy fizotran'ny raharaham-barotra. Ary izany no azo antoka fa ao anatin'izany ny outsourcing ary koa ny foibe fitantanana ivontoerana. Ankoatra izany, ny filankevi-pitantanan-draharaha ambony ao amin'ny birao mpiandraikitra. Manome fanazavana tsara momba ny fampiasam-bola isika. Ny orinasa manana ny IT manokana sy ny toro-hevitra ara-barotra. Izay manome dingana lehibe alohan'ny mpifaninana. Ary koa rafitra fanaraha-maso banky. Noho izany, raha toa ka mandroso amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ekipa fampandrosoana vaovao. Ny ekipa injeniera sy ny marketing amin'ny fampidirana rafitra. Manomboka miasa amin'ny fotoana iray ho an'ny orinasa tsirairay. Tonga ny rafitra rehetra ary miakatra ny orinasa vaovao miaraka amin'ny TCS.
Satria ity orinasa ity dia ny mampiavaka azy famolavolana tetikasa vaovao. Manampy amin'ny fanombohana ny asa vaovao. Ary koa ny rindrambaiko namboarina manokana ho an'ny filàn'izy ireo. dia ny ankamaroan'ireo mpanjifany ao India sy Etazonia matoky an'io marika goavana io. Ary miakatra ny indostria vaovao. Koa satria ny orinasa dia lalana lehibe ny mandeha dia manantena ny isan-karazany fampiasam-bola. Saingy araka ny fantatsika dia afaka apetraka ny mpikaroka momba ny asa. Ohatra orinasa maromaro, avy amin'ny fampivoarana angovo sy injeniera. Mandrapiha-bola tolotra any India sy Dubai. Ankoatra ny fampiroboroboana ny biraon'ny serasera maneran-tany Structure Company no misy any Amerika Avaratra, Amerika Latina, ary Eoropa.
Ankoatra izany, eo amin'ny orinasa TCS Tranonkala karosao. Hita mazava fa misy mpitantana maromaro. Mihalehibe asany miaraka amin'ny TCS. Ary ny tabilao an'ny PDG's sy Ny mpitantana senior dia voafehy mafy. Fikambanana kely kokoa toy ny orinasa fironana. Mbola mitombo miaraka amin'ny orinasa TSC. Amin'ny lafiny iray, famokarana konglomeran'ny Tata Group. Maniry mitombo ary manome ny goavana fahafahana ho an'ny firenena rehetra.
Ahoana no hahazoanao asa ao amin'ny TCS?
Mazava ho azy fa ny tsara indrindra dia ny tranonkala TCS Careers. Marina fa mety marina izany, Tata Consultancy Services (TCS). Manangana olona manerana an'izao tontolo izao. Ary saika any amin'ny firenena manerana izao tontolo izao. Satria fotsiny izy ireo na aiza na aiza. Ary ny mifanohitra amin'izany, dia heverina ho iray amin'ireo orinasa lehibe IT eto India. Noho izany, Mpitsoa-ponenana Indiana mitady asa mitady fikarohana. Amin'ny lafiny ratsy, misy fepetra maromaro mila arahana. Ohatra, any India aloha, ny olona iray dia mila misoratra anarana amin'ny TCS Careers. Avy eo ny orinasa dia manao fisavana. Ary amin'ny fotoana mitovy, eo amin'ny campus na off campus. Ny TCS manosika mpitady asa vaovao hanakarama kandida.
Amin'ny ankapobeny, mpanatanteraka dia afaka manantena ny tolotra asa samy hafa atolotra. Amim-pahatsorana, maro ny asa natolotry ny orinasa B.Tech. Ary koa ny mpilatsaka hofidina MCA dia ampahany tsara ho an'ny mpiasa vaovao. Ka iaraha-mahita izany ny mety ho olom-baovao vaovao, rehefa ela ny ela, miaraka amin'ny asa ho avy. Mazava ho azy fa tsy maintsy manana fianarana tsara sy fanabeazana. Noho izany, nomena ireo hevitra ireo, mitady asa ao amin'ny tranonkala fizahana tranonkala TCS.
Raha manenjika toerana tsy misy ianao na mitady fizarana asa TCS. Avy eo azo antoka fa tokony hanamarina miaraka amin'ny oniversite ianao. Satria maro amin'izy ireo miasa amin'ny manampahefana TCS. Ary amin'izany, ao an-tsaina, ny orinasa any Inde na any ivelany. Angamba mitarika eo amin'ny toeram-ponenana ao amin'ny oniversite. Raha tsy mampiasa ny tranonkala momba ny mpikaroka TCS izany. Ary miezaka ny manao fananganana tobim-pahasalamana eo an-toerana na iraisam-pirenena. satria izay mety hitondra anao hahazo asa. Ary izany no fomba tsara indrindra ho anao amin'ny fitadiavana asa.
Inona no ilainao hanomboka asa miaraka amin'ny orinasa TCS?
Ny tena ilaina dia ny manana B.tech na MCA diplaoma avy amin'ny oniversite fantatra.
Amin'izao fotoana izao, TCS dia manantena ny kely indrindra ho an'ny 60% marika mandritra ny fitsapana momba ny akademika.
Amin'ny ankapobeny, ny marika famantarana 60% dia tsy maintsy ao amin'ny 10th, 12th, diploma / graduation, test academic study post.
Misy fitsapana maromaro alohan'ny handinihana ny kandidà farany. Noho izany, Ny fiomanana dia ny fanalahidin'ny fahombiazana.
Satria ny olona vaovao dia manomboka mampihatra amin'ny oniversite. Ny isam-bolana tokony omen'ny marika 60 marika amin'ny fanandramana voalohany.
Amin'ny ankapobeny, ny fomba tokana mankany amin'ireo mpandray mpiasa Tata. Tsy mety mihoatra ny 2 na 3 taona elanelana amin'ny fampianarana na traikefa miasa.
Ireo kandida tokana afaka manantanteraka asa ihany. Efa nahavita fianarana manontolo andro. ary ireo irery ihany no hoheverina ho kandidà vaovao.
5. Fanadinadinana fitantanana
7. Serivisy asa sy fifanarahana
8. Fanombohana ny asa
Famaranana ho an'ny tetikasa TCS
Noho izany, izao dia fotoana ho an'ny famaranana. Mahita asa soa Tsy mora izany na dia amin'ny serivisy consulting Tata aza. Betsaka ny fanadinana ilaina. Amin'ny ankapobeny ny mpitantana HR. Tsy mora ve izany? Indrindra ho an'ny mpianatra vaovao. Ankoatra izany, ny vondrona mafy indrindra amin'ny olona nahazo diplaoma vaovao. Amin'ny lafiny tsara, mpikatsaka asa amin'ny traikefa tsara. Manana fomba kely mora kokoa hanombohana asa.
Amin'ny lafiny iray, ny Dubai City Company. Ny fitarihana olona ho amin'ny tsara indrindra. Ary antoka ho an'ny serivisy consultata Tata. Mendrika ny isa-minitra amin'ny fotoanao. Noho ny orinasa manerantany. Tsy hoe manome asa tsara. Nefa koa ny fiofanana tsara indrindra. Manantena izahay fa ho anisan'ny mpiasa an-tsitrapo.
Dubai City Manome ny orinasa ankehitriny mpitari-dalana tsara ho an'ny Career ao Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Dubai mitsotra. Ka miadidy izany ao an-tsaina, dia afaka mahazo izao ianao izao mpitarika, toro-hevitra sy asa any amin'ny United Arab Emirates amin'ny fiteninao.